Useshe i-cannabis - Hielscher Ultrasound Technology
Imiphumela yokusesha ye: i-cannabis ("cannabis")
I-Sonication isebenzisa amabutho amakhulu e-shear kanye nengcindezelo ku-medium futhi ikhipha lapho kukhiqizwa okuphezulu ngesikhathi esifushane kakhulu sokukhishwa. Lokhu kusho ukuthi inqubo yokukhipha izinto ezisebenzayo njengama-cannabinoids nama-terpenes avela esitshalweni se-cannabis angandiswa kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inikeza iphothifoliyo ebanzi yokukhipha ama-ultrasonic nezesekeli zokuhlukaniswa okusebenzayo kwamakhompiyutha asebenzayo (isib. I-CBD, i-THC, i-CBG, i-terpenes) esitshalweni se-cannabis. Xhumana nathi namuhla! Siyajabula ukukuncoma isethaphu efanelekile kakhulu yokususa i-ultrasonic ngezidingo zakho!